Ku xirida dekedda Apple Watch oo leh nashqad iyo bir bir ah | Waxaan ka socdaa mac
Habeen aad u qaas ah ayaa imanaya kaas oo, wixii ka sarreeya, si loola wadaago shirkado iyo waqtiyo wanaagsan qoyskooda iyo asxaabtooda. Si kastaba ha noqotee, hal dariiqo oo lagu muujiyo rabitaankeenna ugu fiican waa iyadoo la sameeyo hadiyad, haba yaraadee, hadiyadda aan loo baahnayn inay ahaato wax walax ah, in kasta oo ay xaaladdu sidaas tahay.
Waxaan u soo jeedineynaa deked Apple Watch iyo iPhone aad iyo aad u qaas ah waana inay leedahay naqshad aad u fiican, aragtidayda. Waxaan soo jeedinayaa fikraddan ku saabsan lacag soo dejinta ma aha sababtoo ah waan iibsaday ama isticmaalay laakiin waxaan u baarayaa shabakadda fursadaha kaabayaasha waxaanan soo jeedinayaa kuwa, sidaan qabo, ka tartan badan oo ka fiican.
Munaasabaddan, waxa run ahaantii soo jiidashada leh ee ku saabsan dekeddan maahan oo keliya inay si qumman u qarinayso fiilada kuleylka ee soo-kicinta, taas oo ah, waxaan awoodi doonnaa inaan ku dhejino saacadda si aan dib ugu soo buuxinno laga bilaabo xilliga aan ka soo saarno sanduuqa, laakiin sidoo kale naqshadeynta lafteeda, wadarta ugu yar, waxay ka dhigaysaa xoogaa gaar ah.
Waxay ka samaysan tahay bir bir ah oo birta ah oo leh qaab na xusuusinaysa taageerooyinka ay Apple lafteedu ku isticmaasho Apple Store. Intaa waxaa dheer, waxaan haynaa inay iyadu lafteeda tahay labo kaliya Apple Watch oo keliya laakiin sidoo kale iPhone, tan iyo aasaaska birta wareegsan ee ay leedahay waxaa jira isku xira danab.
Qiimaheeda, si loo helo xeedho loogu talagalay iPhone iyo Apple Watch, waa mid aad u adag oo waa kaliya Wuxuu ahaa 19,99 ur. Waxaad ka arki kartaa wax badan oo ka mid ah markabkan xiriirka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Watch » Ku xirida dekedda Apple Watch oo leh nashqad iyo bir bir ah